We.com.mm - သင်္ကေတတွေထဲက တစ်ခုရွေးပြီး လတ်တလော သင်ဘာကြောင့် လမ်းပျောက်နေလဲဆိုတာ အဖြေရှာလိုက်ပါ
စုန်းလောကမှာ ဒီအဂ္ဂိရတ်သင်္ကေတာတွေဟာ အမြော်အမြင်ရှိခြင်းကို ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီသင်္ကေတတွေကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင် ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်လာတယ်လို့ စုန်းတွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒီသင်္ကေတတွေက ကျပန်းဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘဲ စနစ်တကျ စီရင်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီသင်္ကေတတွေထဲက တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် သင့်စိတ်ဝိညာဉ်က တောင့်တနေတဲ့ အရာကို သိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်က သင်ရွေးချယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်စိတ်ဝိညာဉ်က ရွေးချယ်လိုက်တာပါ။
-	ပုံလှတာ မလှတာအပေါ် အာရုံမစိုက်ပါနဲ့
-	ဦးနှောက်ထဲက အတွေးတွေကို ရှင်းထုတ်လိုက်ပါ
-	ဘာမှမတွေးဘဲ ပုံကိုကြည့်ပါ
-	ပြီးရင်တော့ ပုံတစ်ပုံ ရွေးချယ်လိုက်ပါ
သင်အားသွန်ခွန်စိုက် တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အရာကနေ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ချင်နေပါတယ်။ ခြင်္သေ့ရဲ့ သင်္ကေတက နေရဲ့စွမ်းအင်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခြင်းရဲ့သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။ သင်ဟာ သင့်ဘဝကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေက သင့်ကိုပိတ်လှောင် လွှမ်းမိုးနေတယ်လို့ ခံစားနေရတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ မတူညီတဲ့ တစ်ခုခုကို လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလားလို့ တွေးနေပါလိမ့်မယ်။
လက်ရှိဘဝက သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေလား? လွတ်လပ်မှုရဲ့အရသာကို နောက်တစ်ခါလောက် ခံစားကြည့်ချင်နေလား? အခွင့်အရေးသာရှိရင် အခြားဘဝတစ်ခုနဲ့ နေချင်တယ်လို့ တွေးနေမိလား? သင်ဘာပဲ လုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ အကျိုးအကြောင်းတော့ ရှိခဲ့မှာပါပဲ။ သင်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာကို သင်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် သင်အခုကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာကို သိလာပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူပါ။ လက်ခံပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခဲ့တာ မဟုတ်လား။ ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေက ပြောင်းလဲနေသလို သင့်ကိုယ်သင်လည်း ပြောင်းလဲလို့ ရပါတယ်။ သင်လွတ်မြောက်ချင်နေတယ်ဆိုရင် ထွက်ပြေးလို့ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကံကြမ္မာက သင့်လက်ထဲမှာပဲ ရှိနေတာပါ။
သဲနာရီက ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ အချိန်စက်ဝိုင်းရဲ့ သင်္ကေတ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ အချိန်တစ်ခုခုမှာ ပိတ်မိနေပါတယ်။ နာကျင်စရာအဖြစ်အပျက်တွေ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အတိတ်ကာလမှာ သင့်အချိန်တွေက ရပ်တန့်နေပါတယ်။ သင်ဟာ အဲဒီအချိန်ထဲမှာပဲ နစ်မြှုပ်ပျောက်ကွယ်တော့မလို ခံစားနေရပြီး ပြန်တွန်းလှန်ဖို့လည်း အင်အားမရှိပါဘူး။
အသက်ကြီးခြင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်းက ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ကျွနု်ပ်တို့အားလုံး မွေးဖွားလာတယ်၊ ကြီးပြင်းလာတယ်၊ သေဆုံးသွားတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာလို့ကြောက်နေဦးမှာလဲ။ အချိန်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူလိုက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အတိတ်နဲ့လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ယူလိုက်ပါ။ အတိတ်တွေကြောင့်ပဲ ယနေ့သင်ဆိုတဲ့သူ ဖြစ်တည်လာတာမဟုတ်လား။ ပြီးတော့ အတိတ်ကြောင့်ပဲ သင်အရင်ကထက် ပိုသန်မာလာပြီလေ။
အခုကစပြီး အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချပါ။ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်မှာ အသက်ရှင်ပါ။ သင့်မှာ စွမ်းအားတွေ ရှိပါတယ်။ အချိန်ဆိုတာ သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းပါ။
လရဲ့စွမ်းအားဟာ စိတ်ခံစားချက်၊ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အမှန်တရားတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စိတ်နှလုံးထဲမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်။ သင့်ရဲ့အသိစိတ် အတွင်းနက်နက်ထဲက အရာတစ်ခုက သင့်ကို အိပ်လို့မရအောင် လုပ်နေပါတယ်။ ဘာတွေများလျှို့ဝှက်ထားရလို့ အိပ်ရေးပျက်တဲ့အထိ ဖြစ်ရတာလဲ? ဒေါသတွေလား၊ အမုန်းတရားတွေလား၊ စွဲလန်းတပ်မက်မှုတွေလား?
သင့်ရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်က အနားယူဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ အနားယူဖို့အတွက် သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို လက်ခံလိုက်ဖို့၊ အသိအမှတ်ပြုပေးလိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ လျှို့ဝှက်ခြင်းက မကောင်းတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို စွမ်းအားကြီးစေပါတယ်။ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ဖွင့်ထုတ်လိုက်မှ စိတ်သက်သာရာရမှာပါ။
သင့်ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြတတ်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ ဖိနှိပ်ထားတာ၊ ဖုံးကွယ်ထားတာက သင့်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
သော့ဆိုတာ ဘဝလမ်းကြောင်းအတွက် သိမြင်နားလည်ခြင်း သင်္ကေတပါ။ သင်ဟာ အဖြေတွေကို အသည်းအသန် ရှာဖွေနေပါတယ်။ သင်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဖြေမသိနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဘယ်လိုအဖြေရှာရမလဲမသိတာ ဖြစ်နေနိုင်သလို၊ အဖြေရှာဖို့ ပင်ပန်းနေတာလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း သင်ဟာ ဘာကိုမှစိတ်မဝင်စားဘဲ နေရတာ ပျင်းရိသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
အခုအချိန်ဟာ နေမင်းလို တောက်ပရမယ့်အချိန်ပါ။ သင့်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့ လမ်းကို လျှောက်လှမ်းလိုက်ပါ။ သင့်မှာ ရှိနေတဲ့သော့ဟာ သင့်လက်ရှိဘဝကို ပိုကောင်းမွန်လာစေနိုင်သလို၊ ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း ရရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ခရီးထွက်ပါ။ ခရီးထွက်ခြင်းက သင့်ကို လူအများကြီးနဲ့ပိုမို ကူးလူးဆက်သွယ်ဖို့ အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ စွန့်စားချင်နေတဲ့စိတ်တွေကို အခွင့်အရေးပေးလိုက်ပါ။
မျက်လုံးပုံပါတဲ့လက်ဖဝါးဟာ မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့တွန်းအားတွေကနေ ကာကွယ်ခြင်းရဲ့ သင်္ကေတာပါ။ သင့်ရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်က လွတ်လပ်မှုကို ဆာလောင်နေပါတယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်က သတိပေးဖို့ ကြိုးစားနေတာကို သင်သတိပြုမိဖို့ လိုနေပါတယ်။
အရမ်းကို ဆိုးရွားတဲ့အချိန်တွေမှာတောင် လွတ်မြောက်ခြင်းဟာ သင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့လက်ထဲမှာပဲ ရှိနေပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ပဲ ပိတ်မိအောင်လုပ်တာဖြစ်သလို ကိုယ်တိုင်ပဲ လွတ်မြောက်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုးရွားတဲ့ နေ့ရက်တွေက လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြင်နာပါ၊ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင် ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာ သင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို ချစ်ပေးလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
အနားယူဖို့ အချိန်ပေးပါ။ သင့်စွမ်းအားတွေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပါ။
၂၀၁၈ Sagittarius ဓနုရာသီဖွားများအတွက် ကြိုတင်ခန့်မှန်းဟောစာတမ်း